Jereo ny fandrindrana UTM ao amin'ny Google Maps, ary ampiasao IZAO! rafitra mandrindra hafa - Geofumadas
Jolay, 2012 Cartografia, fanavaozana, Pirinty voalohany
Mandra-pahatongan'izany dia efa nahazatra izany Jereo ny koordinary UTM sy geographic eo amin'ny Google Maps. Fa matetika mitazona ny datum izay anohanan'i Google dia WGS84.
Ahoana raha te-hahita ao amin'ny Google Maps, koordination an'i Kolombia ao amin'ny MAGNA-SIRGAS, WGS72 na PSAD69?
Fandrindrana an'i Espaina amin'i ETRF89, Madrid 1870 na REGCAN 95?
Ary ahoana ny momba an'i Meksika miara-miasa amin'ny GRS 1980 na International 1924?
Roa andro lasa izay dia misy rafitra mamela anao hanao an'izany, ary PlexScape WebServices io. Avy amin'ny namana grika mpamorona ny Plex.Earth, izay mampifandray ny angon-drakitra misy eo amin'ny Google Earth sy AutoCAD, izay amin'ny fomba efa mahazatra izao no mifoka sigara ho an'ny AutoCAD 2013 izay nanova ny fitsipiky ny lalao.
Ary ity servisy PlexScape ity dia manohana tsy latsaky ny 3,000 rafitra rafitra sy 400 Datums, mitovy amin'ny Plex.Earth manohana.
Andao hojerena fitsapana: Andramo ny manazava tsikelikely, satria amin'ny fomba tsotsotra dia tsy dia misy dikany loatra ny interface:
Izaho dia eto Bogotá ary mahaliana ahy ny mahita ny fahasamihafana eo amin'ny WGS84 sy SIRGAS:
Eny ary, eritrereto hoe manodidina aho Topoequipos, araka ny aseho amin'ny sarintany:
PlexScape Web Services, dia manana serivisy telo izao: Iray izay fanarahana tsotra mba hahafantarana ny fandrindrana teboka iray (Coordinates Tracking), iray hafa mametraka toerana eo amin'ny sarintany ary manondrana azy ireo any kml / txt (Open Digitizer) ary ny iray hafa dia izay hampiasaintsika ankehitriny Amboary ny Coordinates.
1. Safidio ny rafitry ny fiandohana
Ity dia safidintsika eo amin'ny kiheba eo ankavia, ilay firenena mahaliana antsika. Amin'ity tranga ity, Kolombia, ary raha vao voafantina, dia hanondro ny WGS84 ho Datum mahaliana izahay.
Eo anelanelan'ny latitude / longitude tab ary Easting / Norting dia misy safidy safidy samihafa. Mahaliana fa ny firenena no akanim-borona satria adala ny mitady azy ireo amin'ireo olona marobe izay tohanan'ny rafitra.
2. Toerana niandohana
Mba hanaovana izany, rehefa hita ny faritra mahaliana antsika hita amin'ny sari-tany, dia alefantsika ny totozy eo ambonin'ny kisary ambany ary mifidy «Mitondrà marika eo amin'ny sari-tany«, Ity dia hampiseho amintsika ny toerana mahaliana amin'ny sari-tany. Avy eo dia sintomintsika amin'ny toerana tena tiantsika hahitana azy io. Toy izany koa no azo atao amin'ireo takelaka ambony, saingy toa azo ampiharina kokoa ny fanaovana azy amin'ny sary masina ary hasehoko izany mandritra ny fampiharana.
Raha te-hahafantatra ny lamin-drafitra misy ny toerana itoeranay izahay, dia miverina any amin'ny icon ary misafidy «Mianara mandrindra ny marika«, Amin'izany, eo amin'ny tontolontsika, dia haseho ny fandrindrana.
Ary raha izay tadiavinay dia ny mametraka lamina manokana, dia manoratra izany eo amin'ny tontonana ary mandalo ny sainam-peo eo amin'ilay sary famantarana nofidianay izahay.Hametraka marika mba handrindra«Ary amin'izany ny hevitra dia ho eo amin'ny fandrindrana izay mahaliana antsika.
3. Jereo ny fandrindrana UTM
Raha te hahalala ny fandrindrana UTM amin'ity teboka ity dia mila manondro ny faritra misy azy izahay. Raha manana fisalasalana isika, dia afaka misafidy iray amin'izy ireo, ary amin'ny safidy «Asehoy ireo fetrany»Miseho ny faritra nasiana loko manga. Fanampiana lehibe satria aleo tadidio izany Kôlônia dia tsy miankina fotsiny amin'ny faritra 17 Avaratra, 18 Avaratra ary 19 Avaratra fa ao ihany koa saingy any atsimo satria ny firenena dia niampitan'i Ekoatera miaraka amin'ireo latsaka amin'ny faritra enina. Noho izany, namboarin'izy ireo ny rafitry ny faritra misy azy ireo izay manasarotra ny fiainany.
Amin'ity tranga ity, nifidy ny UTM Zone 18 N izahay ary raha ny marina dia hitantsika fa misy ny hevitray.
3. Afindra ny fandrindrana manomboka amin'ny tontonana ankavia miankavanana
Hatreto, ny zavatra hitanay dia ny fomba fampisehoana fiaraha-miasa UTM ao amin'ny Google Maps. Saingy liana izahay hahita an'io fandrindrana io ihany amin'ny rafitra mandrindra iray hafa, ho an'ny raharaha MAGNA-SIRGAS. Voalohany, mampiasa ny zana-tsipìka maintso izahay hanondroana fa ireo fandrindrana ireo dia adika avy amin'ny ilany ankavia mankany amin'ny lafiny ankavanana. Ity dia vita amin'ny tsindry iray ary ny mahaliana antsika dia mitovy ny andaniny roa.
Raha te hampavitrika ny tondro tsara dia manao toy izany koa isika: ampidinintsika eo ambonin'ilay sary ny totozy, ary safidintsika «Mitondrà marika eo amin'ny sari-tany«. Raha latsaka any an-kafa io dia mikaroka ny toerana indray izahay ary manondro «Hamafiso ny sainam-peo amin'ny sarintany»Ary mba hifanaraka amin'ny fandrindrana«Hametraka marika mba handrindra".
Ny famantarana fa tsara daholo dia ny pointer manga dia tsy maintsy miaraka amin'ny teboka mitovy amin'ny tondro mainty raha toa ka mitovy ny rafitra mandrindra. Misy korontana kely ihany, nefa mandeha.
4. Fantaro ny fandrindrana WGS84 ao amin'ny SIRGAS
Noho izany dia miova amin'ny WGS84 mankany SIRGAS amin'ny tontonana ankavanana isika. Ary avy eo dia mihodina eo ambonin'ny kisary isika ary miteny «Mianara mandrindra ny marika«, Ka azontsika ny fandrindrana ny teboka efa ananantsika fa amin'ny rafitra hafa. mariho fa amin'ny lat / lon ny fandrindrana dia mitovy ihany, ary io dia miorina amin'ny WGS84 ny SIRGAS.
Fa raha mijery ny zava-mitranga ao amin'ny tarika UTM isika, ny X mandrindra dia samy hafa 3 centimetatra ary ny Y mandrindra centimetatra hafa. Ary izany no antony azo ilazana fa ny rafitra roa dia mitovy. Rehefa mandeha isika dia miova amin'ny milimetatra io fahasamihafana io. Manazava aho fa izany dia mifanaraka amin'ireo masontsivana napetrak'i PlexScape Web Services, misy zavatra hafahafa tsy maintsy hotaterina satria efa nitranga tamiko in-droa io.
5. Fantaro ny mandrindra ao amin'ny PSAD
Afaka misafidy rafitra hafa isika, ary mangataka ny hiverenanareo hifanaraka amin'ny «Mianara mandrindra ny marika«. Tsy tokony hihetsika ny tondro, satria eo amin'ny teboka iray ihany isika, izay averiny dia mandrindra amin'ny rafitra hafa. Ho an'ny tranga, ao amin'ny PSAD 1956 io teboka io ihany dia manana ny co X = 604210.66 Y = 512981.6.
Alaivo sary an-tsaina àry fa ny zavatra tadiavintsika dia ny mifanandrify amin'ny rafitra roa (fa tsy mitovy hevitra), avy eo dia mamaky ny koorda avy any ankavia miankavanana ary avy eo «Hametraka marika mba handrindraAry eo no ananantsika. Io fandrindrana io ihany etsy ambany, amin'ny takelaka roa, fa ny teboka manga dia milatsaka 228 metatra andrefana ary 370 metatra atsimo.
Mahaliana ny fitaovana PlexScape Web Services. Raha ny fahalalako azy irery ihany. Hiresaka andro iray hafa isika momba ny serivisy iray hafa, misy ny sasany aloa, ao anatin'izany io fiovam-po io ihany avy amin'ny fisie misy teboka maro.
Mandehana any amin'ny pejy PlexScape Web Services
Fantaro bebe kokoa momba ny Coordinates UTM
Previous Post«Previous Hiteraka hazo fijaliana fizarana CivilCAD
Next Post UTM Mandrindra ny rafitra naseho ao amin'ny Google Mapsmanaraka »